महिलासँग कुन समय यौनसम्बन्ध राख्दा बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ ? – Everest Dainik – News from Nepal
महिलासँग कुन समय यौनसम्बन्ध राख्दा बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ ?
महिलाहरूलाई पुरुष मिलनको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ । एक अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ ।